Nginibingelela Ngokukhethekile Bafundi Abathweswa Iziqu - UKZN Virtual Graduation
Impumelelo akusona nje isenzeko kodwa ingukusebenza kanzima, ukuphikelela, ukubhekakade, ukuzinikela kanye nokufunda nangaphezu kwalokho, ingukukuthanda okwenzayo, kanjalo nokufunda okufanele ukwenze. Imfundo iyilungelo hhayi isipho. Egameni le-UKZN SRC, siyanihalalisela ekuhlabaneni kwenu, umhlomulo omuhle kakhulu esikhathini esinzima kakhulu ezweni lethu. Nenze ukuba lesi sizukulwane sizigqaje, kufanele njalo sihlale sikhumbula ngokuqhakambisa izithukuthuku ezasiletha lapha. Ngale kwazo zonke izinselele ezilethwe yi-COVID-19 kanye nezingqinamba ebesingenakuzigwema zokufunda bunyazi nikwazile ukukhuthazela niphokophele kwaze kwaba niyaphumelela nawafeza amaphupho kanye nombono kwenu kwezemfundo. Nokho-ke kuyishwa nje ukuba emva kwesikhathi eside kangaka sokusebenza kanzima kwezemfundo, lo mgubho wokuhalalisa nokuqhakambisa wenziwa bunyazi ngenxa yobungozi bobhubhane lwe-COVID-19 kanye nemigomo ethiyayo yokulandela ezokuphepha nokuvikela.
Nakuba kunjalo, imizamo yabaphathi benyuvesi yokuhlela lo mgidi bunyazi kufanele ushayelwe izandla. Okusemqoka kakhulu, kunabazali, ababheki kanye nemiphakathi yethu, esisizile ukuba sifeze amaphupho ethu kwezemfundo. Izwe lethu lisabhekene nezinselela eziminxa mithathu, ukungalingani, ububha kanye nokuntuleka kwemisebenzi. Ngakho uma usuku olunjengalolu lwanamhlanje lwenzeka, impela kuyisithuba sokuba sithakase ngoba baningi abanye lapha ezweni abalangazelela ithuba lokungena ezikhungweni zemfundo ephakeme, ngenkathi nina nibe ngabanenhlanhla. Futhi nisebenze kanzima ukuba niphumelele, iminyango izovuleka, enikwenza uma seningenile yikho okusemqoka kakhulu.
Njengombutho wabafundi, sihlala njalo sibuka usuku lokwethweswa kweziqu njengolubika isiqalo sohambo olusha nesithangami esiletha izibusiso kuleli butho labaholi bakusasa abazoqhubeka nokufaka igalelo elibanzi kwinhlalonhle yezwe lakithi. Kuso sonke lesi sikhathi nilapha, sibambane ngezandla nani ukuze sikhulumisane nabaphathi ukuze kwakhiwe indawo enika wonke umuntu ongena kula magceke amathuba alinganayo. Thina njenge SRC yaseUKZN sizoqhubeka nokuxhumana futhi sinxenxe abaphathi benyuvesi ukuba benze nokungale komsebenzi wemfundo nokucwaninga abawubekelwe bahlale bevule iminyango ukuze siqhubeke nokuxhumana okunezithelo. Kule ntando yeningi yezwe lethu, ukuxoxisana kusemqoka njengoba kuvumela imiphumela efana nalena yanamuhla. Simi ndawonye manje ukuhalalisa ngempumelelo yenu, nalaba abeza emva kwenu bazobukela kini. Thathani ubhaqa nilubase ukuze nizosebenzisa imfundo yenu njengesikhali soguquko. Ukuze niguqule umhlaba, niguqule nemiphakathi nenze umehluko. Ukuhlabana nempumelelo kwenu kuyasikhuthaza futhi kusinika ithemba uma sicabanaga ngezinselele zeCovid-19 ezilokhu zidale njalo ububha, ukufa nokubhubha. Sidinga ithemba elizosiweza. Amandla kulowo nalowo kinina ngokukhuthazela nangezinzulu zobusuku. Kwabanye bethu bekuzehlela nje kanti kwabanye bekuyimimango yokukhwelwa. Kepha ke noma kungaba iyiphi inselele, nonke ninqobile nazuza impumelelo. Sinifisela okuhle kodwa emizamweni yenu yekusasa sengathi ningaphakamisa njalo ibhanela le-UKZN liphephezelele phezulu niqhubeke nokukhuthaza ubungqaphambili. Halala! Umgqigqo uyaqhubeka! Siyabonga kakhulu! Enkosi.
PrevPreviousKusuka kwithimba lezobudlelwane kwabafundi asebegogodile
NextDigital Certificates Web – eCertificates and eAcademic TranscriptsNext